म गफ होइन काममा विश्वास राख्छु :: Press Chautari ::
श्याम तामाङ, सचिवका प्रत्यासी
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बूमा जन्मिएर बहराइनमा काम गर्न छिर्नुभएमा श्याम तामाङ अहिले बहराइन र नेपालमा सफल उद्योगी बन्नुभएको छ । एनआरएन अभियानको शुरुवाताकादेखि नै सक्रिय तामाङ एनआरएनका हरेक अभियानका सरिक हुँदै आउनु भएको छ । एनआरएन बहराइनको संस्थापक उपाध्यक्ष, ३ कार्यकालसम्म अध्यक्ष र हाल एनआरएन बहराइनको प्रमुख सल्लाहकार रहनु भएका तामाङ एनआरएन आइसीसीको बैदेशिक रोजगार कार्यदलको सदस्य, पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यदलको सदस्य समेत हुनुहुन्छ । एनआरएनहरुमा राम्रो समन्वय गर्न सक्ने तामाङले आगामी नेतृत्वका लागि एनआरएनएको सचिव पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ । उहाँसँग एनआरएनको अभियान, सचिव पदको उम्मेदवारीलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको छोटो कुराकानी :
गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी नेतृत्वका लागि सचिव पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, किन ?
हो, मैले गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी नेतृत्वका लागि सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु । म एआरएनको हरेक अभियानमा शुरुवातदेखि नै सक्रिय भएर लागिरहेको छु । एनआरएन बहराइनको अध्यक्षमा लगातार ३ कार्यकाल रहेर कुशलतापुर्वक सम्पन्न गरिसकेको छु । त्यसैगरी एनआरए आइसीसीमा बैदेशिक रोजगार कार्यदलको सदस्य, पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यदलको सदस्य, स्वदेश तथा विदेशमा भएका हरेक कार्यक्रम र अभियानमा सक्रियरुपमा लागेर एनआरएनको मर्म बुझेको हुँदा मैले सचिव पदको दावी गरेको हुँ ।
तपाईले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै आफ्ना प्रतिवद्धता वा घोषणा पत्र त जारी गर्नु भएको छैन नी ?
मैले अहिलेसम्म १९/२० वूँदे कुनै पनि प्रतिवद्धताहरु घोषणा गरेको छैन । म काममा विश्वास राखेर अगाडि बढ्ने मान्छे हुँ । एनआरएनमा विगतमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न धेरै वाँकी छ, ती बुँदाहरु पुरा गर्नु नै मेरो प्रमुख लक्ष्य रहन्छ । मैले प्राथमिकता दिने विषय भनेको सुरक्षित आप्रवासन, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र सामूहिक लगानी नै हो । त्यसैगरी एनआरएनका प्रत्येक देशका एनसीसी र आइसीसीलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयन्त रहन्छ ।
सचिव पदमा अन्य एनआरएनहरुले पनि आकांक्षा देखाएका छन्, आफु नै जित्छु भन्ने आधार के छ तपाईमा ?
मैले सचिव पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको तीन महिना भइसकेकोृ छ तर सचिव पदमा कोही पनि प्रतिष्प्रर्धी अहिलेसम्म देखिएको छैन । एनआरएनका अग्रज तथा साथीहरुले मेरो अनुभव, मेरो कार्य दक्षता र विगतमा मैले गरेका कामका आधारमा सर्वसम्मत दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
एनआरएनको अहिलेसम्मको अभियानलाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
विश्वमा बस्ने नेपालीलाई जोड्ने साझा संस्थाको रुपमा आज एनआरएन विश्वभर छाएको छ । शुरुवातीताका समान्यरुपमा चिनजान गर्नका लागि खोलिएको सामाजिक संस्था आज विश्वभर फैलिएको छ । विश्वमा रहेका नेपालीहरु एकीकृत भएका छन् । आज ६५ देशमा एनआरएनको गठन भइसकेको छ । देशमा लगानी बढाउन मात्र होइन देश निमार्णमा एनआरएनको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ ।
पछिल्लो समय एनआरएनमा केही विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ, यसको कारण के होला ?
एनआरएनमा विवाद नै बढेको भन्न मिल्दैन । एनआरएन प्रतिको मोह र चासो बढेको हो । एनआरएनको विश्वब्यापी अभियान र राष्ट्र निमार्णको जिम्मेवारीमा आउन चाहनु नै ठूलो कुरा हो ।
एनआरएन आगामी दिनमा कसरी अगाडि वढ्नु पर्छ भन्नुहुन्छ ?
आजसम्म एनआरएन विस्तार र व्यापकतामा अगाडि बढिरहयो । तर अव सामूहिकरुपमा देशमा देखिनेगरी केही गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । ब्यक्तिगतरुपमा नेपालमा एनआरएनले धेरै गरिरहेका छन् तर संस्थागतरुपमा सही दिशा दिनु अव जरुरी छ । हामीले आजसम्म छलफल र अन्र्तक्रिया गर्यौ अव कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
धेरै कुरा मैले समेटिसकेको छु । धेरै वोल्नुभन्दा काम गरेर देखाउन जरुरी ठान्छु । सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई आउन लागेको विजया दशमी तथा शुभ दीपावाली र इदको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
विहिवार, २०७० आश्विन १६ गते ०२:४३ / Thursday, Oct 03, 2013 2:43 am